Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Lalao Paranormal: varavarana mena, varavarana mavo
by Waylon Jordan Febroary 8, 2020
by Waylon Jordan Febroary 8, 2020 21,818 hevitra
Andao hilalao lalao: Varavarana mena, varavarana mavo
Fantatra koa amin'ny maha Varavaran'ny saina
Ny lalao mahatsiravina izay mametra ny paranormal dia lohalaharana amin'ny fety torimaso erak'izao tontolo izao. Avy amin'ny maivana toy ny volom-borona, henjana toy ny hazo fisaka… Varavaran'ny saina
ho an'ny malaza Ouija board, isika rehetra dia nilalao iray farafaharatsiny, fa misy ny hafa any, angamba tsy dia fantatra loatra, ary ny iray amin'ireo malaza indrindra Varavarana mena, varavarana mavo. Varavaran'ny saina
Inona ny varavarana mavo varavarana mena?
Indraindray ity lalao paranormal ity dia antsoina Varavaran'ny saina or Varavarana mainty, varavarana fotsy, ary tsara, izay fitambarana loko hafa, azonao eritreretina.
Varavarana mena, varavarana mavo maka roa hilalao. Na izany aza, tonga lafatra ho an'ny mpijery alina be ireo tanora matahotra, noho izany tsy mahagaga raha nipoitra indray izy io tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny lalao mifehy
Tsotra ny lalàna, saingy mety hampihoron-koditra ny vokany, na izany no lazain'ny angano an-drenivohitra.
Mpilalao iray no mpitari-dalana, ary ny iray kosa lohahevitra.
Mipetraka amin'ny tany ilay mpitari-dalana, mifampita tongotra miaraka amin'ny ondana eo am-pofoany.
Avy eo dia hianjera amin'ny tany ilay lohahevitra miaraka amin'ny lohany eo am-pofoan'ny mpitari-dalana ary atsangana ambony ny tanany.
Ny torolàlana dia tokony, manomboka amin'io fotoana io, manomboka manotra ny tempolin'ilay lohahevitra amin'ny fihetsiketsehana boribory miantsoantso hoe: "varavarana mena, varavarana mavo, varavarana miloko hafa" hatrany hatrany, natambatra izay nanatri-maso ny lalao. Varavaran'ny saina
Rehefa tafiditra ao anaty fahitana ilay lohahevitra dia ho hitan'izy ireo ao anaty efitrano iray ao an-tsainy ary amin'izany fotoana izany dia tokony hampidina ny tanany amin'ny gorodona izy ireo ary hanamarika ilay torolàlana sy ireo vavolombelona hijoro tsy hiantsoantso intsony.
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny lalao.
Amin'izay fotoana izay dia hanomboka hametraka fanontaniana momba ilay lohahevitra ilay olona miasa ho mpitari-dàlana mba hahafahany mamaritra ny efitrano.
Ny vavolombelona rehetra dia tokony hangina mba tsy hisy feo afa-tsy ny feon'ny mpitari-dalana sy ny feon'ny lohahevitra mamaly ny fanontanian'ilay torolàlana.
Mety hanontany ny mpampianatra hoe inona ny lokon'ny varavaran'ny efitrano, ny zavatra tsapan'izy ireo momba ny varavarana, ary asaivo mandehandeha isam-baravarana mankamin'ny efitrano hafa izy ireo.
Entanina ny tompon'andraikitra mba hamaly ny fanontaniana rehetra am-pahamarinana mandra-pahatongan'ny mpanapaka hanapa-kevitra ny hampitsahatra ny lalao, saingy misy fampitandremana sy famantarana loza mety hitranga ao an-tsaina.
Loza tokony hotadidina Varavaran'ny saina
Araka ny Mampatahotra ho an'ny ankizy:
Raha mifanena amin'ny olona ao amin'ny efitrano ianao dia tsara kokoa ny tsy mifanerasera amin'izy ireo. Mety ho ratsy fanahy izy ireo ary manandrana mamitaka anao.
Raha sendra ao anaty efitrano feno famataranandro ianao, dia miala avy hatrany. Afaka mamandrika anao ny famantaranandro.
Afaka mandeha amin'izay tianao ianao, fa azo antoka kokoa ny miakatra noho ny midina.
Ny zavatra maivana sy ny loko maivana dia mazàna tsara kokoa noho ny maizina sy ny maizina.
Raha sendra voafandrika ao anaty efitrano ianao dia tsy maintsy manandrana mifoha. Raha tsy manao izany ianao dia mety ho voafandrika mandrakizay.
Raha maty ianao amin'ny lalao, dia ho faty amin'ny tena fiainana ianao.
Raha mifanena amin'ny lehilahy manao akanjo manaitaitra anao ianao dia atsaharo avy hatrany ny lalao.
Raha sahirana ilay mpamily amin'ny famohazana ilay lohahevitra tsy hitany, dia tokony ahofany mafy izy ireo mba hahatonga azy ireo ho taitra.
Toa mampihoron-koditra, marina ?!
Ny teboka iray manontolo an'ny Varavarana mena, varavarana mavo, toa, ny mijery ny fiasan'ny sainao manokana ary ny mahatakatra ihany koa fa misy lafiny mainty koa ho an'ny tsirairay.
Ny sasany amin'ireo zavatra mety sendra anao ao anatin'ny lalao dia mety ho ireo zavatra momba anao manokana izay tsy tadiavinao atrehana.
Efa nilalao ve ianao Varavarana mena, varavarana mavo na misy fiovana amin'ity lalao mampihoron-koditra ity? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra!
Jereo ny Cateories Select Category4K UHD (19)Amazon (sarimihetsika) (11)Amazon (andiany) (12)AppleTV + (6)Blu Rays (40)Box Office (1)Horohoro amin'ny hatsikana (51)Tantara an-tsary (16)Zavatra tsara hividianana (57)Cool Stuff tokony hatao (9)Krismasy mampatahotra (2)Disney+ (série) (1)Editorial (1)Vaovao momba ny fialamboly (18)Facebook (andiany) (1)Angano (49)Rakitra hita (28)Mampihomehy (1)Lalao (220)Gore (26)Halloween (3)Haunts (6)HBO (andiany) (9)Boky mahatsiravina (69)Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (11,377)Horror Series (159)Subgenres mahatsiravina (18)Hulu (andiany) (7)Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (49)Resadresaka nifanaovana (andiany) (6)Horohoro LGBTQ (43)Lisitry (sarimihetsika) (46)Lisitry (andiany) (2)Tsena (22)Monster Horror (11)Sarimihetsika (3)Hevitra momba ny sarimihetsika (91)Sarimihetsika (525)Mozika (44)Netflix (sarimihetsika) (39)Netflix (andiany) (64)Tsy angano (5)Paranormal (78)Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (55)Sci-Fi (2)Andiany (1)Famerenana andian-dahatsoratra (10)Sarimihetsika fohy (2)Fotoana fampisehoana (andian-dahatsoratra) (1)Shudder (sarimihetsika) (61)Shudder (andiany) (20)Slasher (6)Hafahafa sy tsy mahazatra (42)Streaming Series (51)Streaming Series (2)Kilalao (8)Tranofiara (3)Trailer (lalao) (1)Tranofiara (sarimihetsika) (389)Tranofiara (andiany) (51)Heloka tena izy (51)TV (8)VOD (1)VR (1)YouTube (2)YouTube (sarimihetsika) (5)YouTube (andiany) (13)Zombies (1)
Nianjera tamin'ny toerana faharoa ny 'Scream' rehefa nahazo ny 'Spider-Man'...
Rob Zombie nizara sary vaovao momba ny 'The...